आइसीसीकाे निलम्बन फुकुवा नहुँदै नेपाली क्रिकेटकाे नेतृत्व हत्याउने दाउपेच ! | | Neplays.com
आइसीसीकाे निलम्बन फुकुवा नहुँदै नेपाली क्रिकेटकाे नेतृत्व हत्याउने दाउपेच !
By Neplays	 Last updated Jun 12, 2019
नेप्लेज | नेपाल क्रिकेट संघ क्यान निलम्बनको तीन बर्ष भन्दा बढि समय भइसक्दा पनि अझै निकास निस्कीएको छैन् । क्यान निलम्बनसँग नेपाली क्रिकेटको बागडोर आईसीसीले लिएको छ । आईसीसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपसँग समन्वय गरेर अहिले काम गरिरहेको छ ।
नेपालले ४ वर्षका लागि एकदिवसीय मान्यता पाएको पनि डेढ बर्ष भइसक्यो । यस बीचमा नेपालले २ वटा एक दिवसीय सिरिज खेल्ने मौका पायो । त्यो भन्दा बढी लाभ लिन अझै सकेको छैन । यस विषयमा क्रिकेटका जानकारहरु नेपालमा क्यान नभएकाले यस्तो भएको बताउँछन् ।
आईसीसीले नेपालमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै क्यान निलम्बन गरेको थियो । निलम्बन फुकुवाको विषयमा विभिन्न शर्तहरु अघि सारेको आईसीसीले ती सर्त अनुसार नेपालमा काम पनि भइरहेको छ । तर पटक पटकको अदालतमा मुद्दा चल्ने प्रकरणले पनि आईसीसी अहिले हैरान भएको छ । त्यसैले आसन्न आईसीसीको बोर्ड बैठकबाट नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने पक्षमा पुगेको छ ।
नेपाली क्रिकेटलाई निम्बन गरेपछि समस्या सुल्झनुको साटो झनै बल्झदै गएपछि आईसीसीले करोडौं रकम नेपालमा खर्चनु पर्ने बाध्यता आईलागेको छ । यसैगरी अदालतमा हुने मुद्दाका कारण वकिल खर्च, कम्तिमा ४ जना आईसीसीका कर्मचारीलाई नेपाल राख्नु परेकाले पनि उसको खर्च बढेको क्रिकेटका एक जना जानकारले बताए ।
नेपालमा क्रिकेटकाे विवाद के भइरहेकाे छ, नेपाली क्रिकेटकाे अपडेटका लागि बारम्बार आइसीसीले पदाधिकारी पठाएकाे थियाे । उनीहरुकाे नेपाल बसाइकाे खर्च यतैबाट ब्यहाेर्नुपर्ने हुन्छ । आइसीसीले उनीहरुलाई भत्ता दिने गरेकाे थियाे । उनले भने अब आईसीसी पनि नेपालसँग ढुक्क भएको छ, त्यसैले अब बस्ने आईसीसीको बोर्ड बैठकले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्न सक्छ ।
आईसीसीसँग अब दुई वटा विकल्प छन् । राखेपसँग मिलेर क्यानको निर्वाचन गराउने र निर्वाचनबाट आएको कमिटिले क्यान चलाउन दिएर आफू नेपालबाट विदा हुने । अर्को सिधै सरकारसँग बोर्ड गठन गरेर अघि बढ्ने ।
ती व्यक्तिका अनुसार अहिले निर्वाचन गरेर क्यान अघि बढाउने पक्षमा बर्तमान सरकार नै सहमत छैन् । जसका कारण सरकार जसरी हुन्छ बोर्ड गठन गर्दा आफ्ना मान्छेलाई ल्याउन सकियो । क्यानको नेतृत्वका लागि अहिले सत्तारुढ दल नेकपामा नेताहरु दौडधूपमा लागि सकेका छन् । हालै केही जिल्लामा भएको निर्वाचनमा आफूलाई पनि केन्द्रीय प्रतिनिधी बनाएर पठाउन पूर्व युवा तथा खेलकूदमन्त्री दलजीत विके श्रीपालीले पहल गरेका थिए । तर उनको पहल सार्थक भएन् ।
यसैगरी सभामुख कृष्णबहादुर महराका पुत्र राहुल महराले पनि आकंक्षा देखाएका छन् । पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगितामा उनी चितवन राईनोजका मालिक रहेका थिए । उनले पनि प्रतिनिधी बनेर विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा पुगेको बताइन्छ ।
त्यसैले सरकारले आफना व्यक्तिहरु प्रतिनिधिको रुपमा आउन नसकेपछि बोर्ड गठन गरेर अघि बढ्दा श्रीपाली र महराजस्ता राजनीतिक पृष्ठभूमीका व्यक्तिलाई ल्याउन सक्ने आंकलन गरेर बसेको छ र त्यसैमा काम अघि बढीरहेको जनाइएको छ । यदि बोर्ड गठनमा पनि फेरि लफडा भयो भने पुनः विनयराज पाण्डे नै क्यानको अध्यक्ष बन्ने पक्का जस्तै छ ।